Boutique Guesthouse "Domizil", Valea Porumbacului - I-Airbnb
Boutique Guesthouse "Domizil", Valea Porumbacului
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguHorst
Indlu yokugqibela yeendwendwe kwindlela eya kwincopho yesibini ephezulu ye-Fogarasian Carpathians, i-Negoiu, inika intuthuzelo yeli xesha, ukuzola, ukuphumla kwaye kodwa ukufutshane neendawo ezaziwa kakhulu nezithandwayo zaseTransylvania.
Igumbi lethu lokuhlala linika indawo yomlilo epholileyo, indawo entle yokuphumla kunye netafile enkulu yabantu abafikelela kwi-10. Sibeke umzamo omkhulu kuyilo kunye nesandi kunye nokukhanya kwegumbi, ukudala umoya omangalisayo wasekhaya. Iimpawu zekhaya ezihlakaniphile zivumela ulawulo olupheleleyo kwimo efunwayo ngoku. Ingqokelela encinci kodwa ekhula rhoqo yemisebenzi emincinci yobugcisa igqibezela umfanekiso. Wamkelekile kwindlu yethu yeendwendwe ekhethekileyo.
Imizuzu ye-15 ukuhamba ukuya kwindawo eyaziwayo yehlabathi "Castelul de Lut", i-2-3 iiyure zokuhamba ukuya eNegoiu Cabana (Cabana Negoiu), i-45 imizuzu yokuqhuba ukuya kwindlela ephakamileyo yaseTransfagaras Transfăgărăşan, "esona sitalato esihle kakhulu emhlabeni" (uJeremy Clarkson ), imizuzu engama-50 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya esikufutshane (Sibiu / Hermannstadt) kunye nezinto ezininzi ezintle nezinomtsalane ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Horst
Sisoloko sifumaneka ngefowuni, ngomyalezo nange-imeyile. Sitsalele umnxeba okanye usibhalele nangaliphi na ixesha.